Canjeero baradho oo hilib laga buuxiyey - Recipe | Recipe
Canjeero baradho oo hilib laga buuxiyay
Alicia tomero | 25/10/2021 17:21 | La cusbooneysiiyay 25/10/2021 17:25 | Recipes, Recipes Fun
Haddii aad jeceshahay cuntooyin kala duwan, halkan waa soo jeedintan cajiibka ah si aad ula wadaagto asxaabta iyo qoyska. Waa hab kale oo wax lagu kariyo, halkaas oo aan ka dhigi doonaa cajiinka baradho ah iyo hilib duqadda ah oo buuxinaya, taasoo keeni doonta in canjeero macaan la sameeyo.
Haddii aad jeceshahay cuntooyinkan buuxinta waxa kale oo aad isku dayi kartaa our Lasagna hilib iyo khudaar.
Waqtiga diyaarinta: 60 m
Wadarta waqtiga: 1 saac 50 daqiiqo
Waxyaabaha ay ka kooban tahay canjeelada baradhada
700 g baradhada
Qiyaastii 180 g oo bur ah
Waxyaabaha ay ka kooban tahay para el relleno
400 g oo hilib lo'aad ah
Qaadada oo ah dhir la jarjaray
5 xabbo oo jiis ah
140 g oo jiis ah
Waan gooynay basasha qaybo yaryar toontiina waanu diiray oo googooyna qaybo yaryar.
Waxaan ku ridnay digsi shiilan a jet oo saliid saytuun ah. Markaad kululaato, ku kari basasha toonta oo ha jilcin.
Waxaan ku darnaa hilib shiidan, ku dar milix iyo basbaas oo ha ku qaboojiso basasha. Waxaan u ogolaanay inuu brown ku dhawaad ​​dhamaadka. shaaha oo ah paprika.
Waan diirnaa baradhada oo jarjar qaybo yaryar. Waxaan ku ridnay digsi biyo ah oo ku kari milix yar.
Marka la kariyo waanu daadinaynaa oo waxaan ku ridnay baaquli.
Iyada oo la kaashanayo fargeeto waanu burburinay oo ku sax milix iyo basbaas. Waxaan ku darnaa ukunta iyo qaado oo ah dhir la jarjarey.
Waxaan ku daraynaa daqiiqda in yar oo yar oo waxaan samaynaa cajiinka cufan oo siman. Waxaan u qaybineynaa cajiinka laba qaybood oo samee laba kubbadood.
Waxaan u simanahay kubbadda cajiinka si aan u sameyno keeg cabbirkiisu le'eg yahay digsiga shiilan ee aan isticmaaleyno.
Waxaan ku ridnay cajiinka digsiga, ku dar xaleef farmaajo, dhig hilibka duqadda dushiisa oo ku dabool farmaajo.
Kubbada kale ee cajiinka waxaan ku sameyneynaa si la mid ah tillaabadii hore. Waanu kala fidinnay iyo waxaan u qaabaynnaa keeg, kaas oo la mid noqon doona kii hore. Waxaan dhigeynaa kor oo ku cadaadi cidhifyada farahayada si ay u xirto una joogsato. Waxaan u ogolaanay in ay brown for 15 daqiiqo dab yar dhinac. Kadibna dhinaca kale ayaanu ka bunniyaynaa, annagoo u rogaya sidii omelette oo kale. Canjeeradayadu waa diyaar waxaanan u adeegi doonaa kulayl labada dhinacba.
Wadada buuxda ee maqaalka: warqad dhakhtar » Recipes » Canjeero baradho oo hilib laga buuxiyay
Koofiyado fudud oo gaabinaya
Baastada leh digirta cagaaran, baradho iyo pesto salaar